Faa’idooyinka meyrashada biyaha qabow.. | Gaaloos.com
Home » qoyska » Faa’idooyinka meyrashada biyaha qabow..
Faa’idooyinka meyrashada biyaha qabow..
Sida la xaqiijiyey ku meerashada biyaha qabow waxay u leedahay dhowr faa’ido baniaadamka waxaa ka mid ah kuwa aan soo tixi doono.
1.Waxay kordhiyaan feejignaanta qofka: biyaha markii uu ku daadanaayo jirkaada waad ka baqeysaa waxaa kaa soo booda neefsasho gudahaaga ka timaada, naxdinta jirkaaga ee qabowga ayaa nagu keenta diirimaad, waxaa badanaayo garaaca wadnaha kaas oo u qeybiya jirka dhiig badan.
2.Waxay sifeeyaan timaha iyo maqaarka: Markii ay timaado timaha iyo maqaarka waxyaabaha soo celiya aragaaga ama quruxdaada waa ku qabeysiga biyaha qabow oo dabiiciga ah, biyaha qabow waxay dulduleedka jirka ka daboolaan wasaqda dibada uga timaada.
3.Biyaha qabow wuxuu hagaajiyaa difaaca iyo wareegga dhiiga: Wuxuu dhiiri geliyaa dhiigga in uu ku wareego xubnaheena kaasi oo la dagaalama mushkiladaha maqaarka iyo wadnaha, wuxuu kor u qaadaa caafimaadka wadnaha, wuxuu yareeyaa dhiiga oo kor u kaca, xididada ayuu ka ilaaliyaa in ay xirmaan iyo difaaca jirka oo qeyb ka qaato.
Aqriso: 10 qabiil ee ugu kacsiga badan somalida
4.Wuxuu kobciyaa in uu miisaanka culeyska hoos u dhiggo: Jirka baniaadamka ayaa ka koobma labo qeyb oo fats ah oo la kala yiraahdo white fat iyo brown fat. white fat ka ayaa aruuriya markii aan gubeyno calories badan si uu jirkeenu u shaqeeyo, ma u burburiyo ama gubo jirkeena si uu awood u helo, markaa ayey ku badaneysaa jirka qeybihiisa kala gedisan taasi ayaa ah mida aan la dagaalanno, hadaba brown fat waa fat ka fiican oo u keena jirkeena diirimaadka wuxuu aad u howlgalaa markii jirka qabow siyaado ah uu dareemo.
5.Waxaa lagu daaweeyaa muruq xanuunka iyo kor xanuunka: Waad aragtaa ciyaartooyda markii ay dhaawacmaan ama meeli bararto waxaa la saaraa baraf, haddi biyo qabow aad ku qabeysatid wuxuu kaa qaadaa xanuunka jirka iyo murqaha.
6.Wuxuu yareeyaa werwerka: markii aad ku boodo biyo qabow inaad ku meyratid waxaad adkeysey adadeegaaga, waxaa kordha sabarka.
7.Tiixda qabow waxay kordhiyaan hormone-ka Testosterone: Ilaahay wuxuu ku beerey xaniinyaha ragga dibada jirka taasi oo loogu gon leeyahay in ay qaboob ahaadaan mar walba, haddii xaniinyaha aad loogu dhoweeyo kuleylka waxaa dhici karta inuu yaraado hormone-ka Testosterone kadibna ay yaraato shahwada.
Title: Faa’idooyinka meyrashada biyaha qabow..